Yekutanga alpha vhezheni yeUbuntu 16.10 inoburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu 16.10 yatove neayo yekutanga alpha vhezheni. Iyi vhezheni yakatanga kwazvo uye inoenderana neshanduko zhinji mushanduro yekupedzisira
Kunyangwe isu tichiri mumwedzi waChikunguru, vanhu veCanonical yatove kushanda pane inotevera vhezheni yeUbuntu, sezvo yekutanga alpha shanduro dzeUbuntu 16.10 dzakatoburitswa kare.
Ubuntu 16.10 alpha vhezheni ndicho chikamu chekutanga chekuvandudzwa kweiyi inoshanda system, izvo sekuziva kwedu zvakarongerwa kubuda muna Gumiguru wegore iro (nekudaro zita rekuti 16.10, regore nemwedzi zvichiteerana).
Parizvino, kuve yekutanga kwazvo vhezheni, hapana akawandisa maficha. Nanhasi, ino inoshanda system inoshanda neKernel 4.4 LTS, systemd 230 uye iyo Unity 7 desktop mune yakajairwa vhezheni yeUbuntu. Zvimwe zvinonaka zveUbuntu 16.10 vhezheni yakabudawo, senge vhezheni ine Mate desktop uye Ubuntu Kylin pakati pevamwe.
Iyo alpha vhezheni yeanoshanda system ndiyo yekutanga chikamu chekusimudzira kwayo, umo maficha echirongwa anotanga kuyedzwa Ngatione kuti vaizoshanda sei. Izvi zvinoteverwa neshanduro dzeBeta, vanoburitswa uye pakupedzisira vhezheni dzekupedzisira.
Nechikonzero ichi, alpha vhezheni inguva yekutanga-vhezheni, iine mashoma maficha uye asina kugadzikana, sezvo achiripokana hapana bhugi yakaonekwa mushanduro, Sezvo iri iyo vhezheni yekutanga kuburitswa, hapana mushandisi anga achiri kukwanisa kuyedza kuti aone zvipembenene.
Neichi chikonzero, pakati pezvino naGumiguru kana vhezheni yekupedzisira yeiyi inoshanda system ichibuda, zvakawanda zvinogona kuitika. Imwe yeshanduko dzakarongwa es kubva kernel vhezheni 4.4 LTS, kune inotevera kernel 4.8 yeiyi vhezheni.
Uyewo madhesiki anozochinjirwa iwo akasiyana zvinoenderana, kuwedzera kune izvo zvechokwadi zvese zvipukanana zvinoonekwa mune zvinotevera shanduro zvichagadziriswa.
Kana iwe uchida kuziva chaizvo kuti ndeipi nhau uye uwane ye download link, tinya chinongedzo chandakakugadzirira Ubuntu mukuru, iyo yandinokupa iwe (kana iwe uchiziva Chirungu), dzese nhau dzeUbuntu 16.10 alpha uye ayo ekurodha zvinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Yekutanga alpha vhezheni yeUbuntu 16.10 inosunungurwa
Ndeupi musiyano uripo pakati pexx.04 ne xx.10 ????
Zvese zvine nguva yenguva iri mwedzi mitanhatu yega yega vovhura beta nepo makore maviri ese vavhura yakagadzikana .. semuenzaniso muna 6 vakavhura yakagadzikana 2 kozoti beta ye2014 (14.04 mwedzi dsps), 14.10 (6 mwedzi dsps) yakabuda, 15.04 (6 months dsps) uyezve iyo yakagadzikana 15.10 lts 6 mwedzi mushure mekuwedzera iyo makore maviri
Pindura kuna heyson
Kana mushanduro dzinobuda mwedzi yega yega mitanhatu, zvitsva zvinowedzerwa zvinoyedzwa kusvikira wasvika iyo lts vhezheni inobuda makore maviri ese
Maitiro ekuenda kubva kuDebian Stable kuenda kuDebian Kuedza iyo iri nyore nzira